मृत्यु हुँदा शरीरबाट कसरी निस्किन्छ आत्मा ? – rastriyakhabar.com
मृत्यु हुँदा शरीरबाट कसरी निस्किन्छ आत्मा ?
यमदूतले त्यो सूक्ष्म शरीरलाई समातेर यमलोक पु-याउँछन् । पापी जीवात्मालाई अपराधीलाई जस्तो घोक्र्याएर लगिन्छ अनि बाटोभरि त्यसले नरकमा पाउने दुःखको वर्णन गर्छन् । यमदूतहरूको यस्तो भयानक कुरा सुनेर पापात्मा रुन थाल्छ तर उनीहरू त्यसमाथि दया देखाउँदैनन् ।
त्यसपछि त्यो बुढी औंलो बराबरको शरीर डरले काँप्दै र कुकुरले टोकिँदै आफ्ना पापहरूको सम्झना गर्दै हिँड्छ । आगो जस्तो तातो हावा र तातो बालुवामा बल्लतल्ल त्यो हिँड्छ र भोकप्यासले तड्पिन्छ । यमदूतहरू त्यसलाई ढाडमा कोर्रा हान्दै लान्छन् । त्यो बाटोमा घरिघरि लड्दै बेहोश हुन्छ । यमदूतले त्यसलाई अँध्यारो बाटोबाट समेत यमलोक पु-याउँछन् ।
गरुड पुराणका अनुसार यमलोक यहाँबाट लाखौं किलोमिटर टाढा छ । धेरै यमदूतहरूले चुट्दै पिट्दै त्यहाँ पु-याएपछि पाप अनुसारको सजाय दिन्छन् । सजाय पूरा भएपछि जीवात्मा घुमेर बस्छ ।
पछि त्यो जीवात्माले शरीरमा पुनः प्रवेश गर्ने इच्छा राख्छ तर यमबन्धबाट मुक्ति पाउँदैन । असाध्यै पापी जीव छ भने छोरानातिले दिएको पिण्ड पनि त्यसले पाउँदैन र भोकप्यासले सताइएर तड्पिबस्छ ।